Ukubuyisa isithandwa sakho noma intombi yakho usebenzisa amanzi emvula umlotha wamandiya umchamo wakho isikhafulo lesi umuthi wokubuyisa x yakho
I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".
Amanzi emvula buyisa ubaba wengane
Ngifuna ukubuyisa indoda yami kumele ngenzenjani? Sizokuchazela lapha isikhafulo esisheshayo sokubuyisa intombi yakho noma umfazi wakho noma ex yakho eyakushiya kudala. Ukushiwa isithandwa sakho kungenza impilo yakho ibe sad uphatheke kabi. ikakhulukazi uma uchithe isikhathi eside uthandana naye.
ukuphephetha umuntu wakho ngomlotha wamandiya kuzomenza azizwe ekuthanda akufonele, axolise noma ngabe kwakunguwe owamphatha kabi. Uzobuya ngokushesha, kulomxovo wokulanda isithandwa sakho uzodinga.
Amanzi omfula ohambayo noma amanzi emvula
Uyakuhlanganisa konke lokhu ukufake ebhodleleni elicane, Ekuseni, emini, ntambama ebusuku uyashukuza / uyaxukuza ibhodlela lakho, Ubize isithandwa sakho ngegama usho ukuthi masibuye ngokushesha. bese ufaka emlomeni ukhwife or ukhafule or ufele (wonke lamagama asho into eyodwa). Uyakhafula or uyaphephetha ngawo umuthi lo, kothi kuphela isonto wobe esebuyile ubaby wakho. Uma nginesichitho ngifuna ukubuyisa usbali , ngabe azosebenza yini amanzi emvula? Kuzomele ukhiphe isichitho kuqala.
Ukugeza ngamanzi emvula kufana nokusebenzisa isiwasho sokuzihlanza, geza ngamanzi emvula or olwandle or omfula ohambayo ukuze uzohlanzeka uphume imimoya oyifakwa ngabantu, kanye nemimoya oyicoshayo kubantu in public.
Enzani amanzi olwandle , amanzi olwandle uyageza ngawo uma unamaphupho amabi, ayangena emithini yezikhafulo, lapho uthakathwa khona uma ugeza ngamanzi olwandle umuthi awusebenzi kuwena. Umlotha wamandiya wenziwani noma wenzani , uyasebenza kwizikhafulo, kwiziwasho, wenza iziwasho zibe namandla, wenza izikhafulo zisebenza umlotha wasendiya unamandla kakhulu. Umchamo wakho uyasebenzi kwizikhafulo ikakhulu nasekukhipheni idliso.
Dr Mzo Khehlelezi
Professor 3 second
Dr VVO mkhize umsamo
Dr Gogo bathini mbatha tv
Dr 3 cent ohlangene
Umuthi wemali & nokuba rich
Isikhafulo sokubuyisa indoda (Amanzi emvula)
Isikhafulo sokubuyisa indoda (DJ sunlight)
Ukubuyisa i-x yakho
Mchamo wemfene wenzani?